Mitsitsia $ 50 amin'ny mpikambana MarketingProfs PRO | Martech Zone
Mitsitsia $ 50 amin'ny mpikambana MarketingProfs PRO anao
Sabotsy, Janoary 5, 2013 Sabotsy, Janoary 5, 2013 Douglas Karr
Raha mbola tsy nojerenao ny sasany amin'ireo tombontsoa sy fampianarana mahavariana azo alaina ao MarketingProfs, tena tokony ianao. Nandritra ny 10 taona mahery, MarketingProfs dia nampiseho tamin'ny matihanina izay tena mandeha - ary izay tsy mandeha - eo amin'ny tsena ankehitriny.
Ny fidirana ho mpikambana fototra dia ny fahazoana miditra amin'ny tranomboky feno lahatsoratra sy gazety. Ny PRO Membership dia manampy seminera hahitana, maka Internet fohy 10, fanangonana tranga ho an'ny fanadihadiana tranga, SmartTools mora ampiasaina, ary maro hafa. Midira anio, ary fantaro ny antony mahatonga ny matihanina maherin'ny 492,000 miankina amin'ny MarketingProfs hanampy azy ireo hanangana programa marketing izay mandeha.
Midira anio mampiasa kaody coupon DKVIP ary hahazo $ 50 ianao amin'ny vidin'ny Membership PRO $ 279!
Ny Internet dia feno torohevitra ara-barotra, torohevitra momba ny varotra ary manam-pahaizana momba ny varotra — fa ny ankamaroan'ny zava-misy dia ny fako tsy misy fangarony na tena mahasadaikatra ny mamantatra. Ny ekipan'ny fanitsiana MarketingProfs dia manapaka an'io tabatabam-barotra rehetra io mba hahitana ireo manam-pahaizana sy mpivarotra ao anaty lavaka izay mahafantatra izay lazain'izy ireo. Maka ny fahalalany izy ireo ary mampifangaro izany amin'ireo olon-kendriny amin'ny marketing mba hanovana azy io ho torohevitra mahasoa izay azonao ampiasaina amin'ny alàlan'ny taratasinay, kaonferansa, seminera, podcast, lahatsoratra ary webcasts.
Tokony hanao araka ny tokony izy izy ireo, orinasa an-tapitrisany dolara manompo vondrom-piarahamonina misy mpandraharaha mihoatra ny 492,000 XNUMX, tompona orinasa kely ary mpivarotra matihanina amin'ny orinasa lehibe indrindra manerantany.
Karatra tsy manam-paharoa… er Chip
Mifanerasera: Mamokatra atiny tsara kokoa matetika